Go’aan rasmi ah oo laga gaaray xildhibaanadii muranka ka taagnaa iyo xubno cafis loo fidiyay (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Go’aan rasmi ah oo laga gaaray xildhibaanadii muranka ka taagnaa iyo xubno cafis loo fidiyay (AKHRISO)
Waxaa habeenkii xalay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya lagu soo gaba-gabeeyay shirkii madasha qaran oo muddo 10 maalmood ah halkaasi ka socday, waxaana shirkaasi laga soo saaray go’aan dib loogu laabanayo kuraastii ay laaleen guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka dalka, kuwaas oo tiro ahaan gaaraya 11-kursi.
“MHQ waxay GXKHDD ka dhegeeysatay xog waran tifaftiran kuna saabsanaa 22 kursi oo dacwadahooda ay dhageysteen dacwooyinkaas oo mid mid MHQ iyo xubnaha guddiga si qooto dheer isaga xog wareysteen isuna falanqeeyeen, guddiga waxa ay madasha u sheegeen 11 ka mid ah kuraasta muranka ka taagnaa ay dib u falanqeeyeen xalna ka gaareen, oo hadda ay fasaxeen, 11-ka kalena ay go’aamiyeen in doorasho dib loogu celiyo.” Ayaa lagu yiri war-Murtiyeed soo saareen madasha madasha qaran.
Dhinaca kale, madaxda madasha qaran ayaa si wadajir ah isugu raacay in la cafiyo musharixiin hore oo ay ka mid yihiin wasiiro hore looga mamnuucay inay dib ugu tartamaan kuraastaasi.
“In dhammaan musharixiintii guddiyada doorashooyinku ka hakiyeen xaqa siyaasadeed ee ka qeyb gelidda doorashooyinka waa laga cafiyay hakinta xuquuqdooda siyaasadeed oo way ka qeyb-geli karaan tartanka doorashooyinka” Ayaa sidoo kale lagu yiri war-murtiyeedka kasoo baxay madaxda madasha qaran.
Hoos ka aqriso kuraasta muranka keenay oo dib loogu laabanaayo doorashadooda